Ndị a bụ ọnụahịa nke iPhone Xs na XS MAX na oroma | Gam akporosis
Ndị a bụ ọnụ ahịa nke iPhone ọhụrụ na oroma
Eder Ferreño | | Mobiles, Ndị ọrụ ekwentị
IPhone ọhụrụ nke Apple gosipụtara n’oge na-adịbeghị anya bụ ndị isi na-akwado izu. Modelsdị ọhụrụ atọ nke ụlọ ọrụ Cupertino na-achọ imegharị ekwentị ya. A na-atụle ma na-akọwapụta ekwentị nke ọma ma tụlee ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ọnụahịa nke ekwentị ọhụrụ atọ a na-eweta ọtụtụ arụmụka.
Apple emegharịrị iPhone ya kpam kpam na ụdị atọ a, Xs na Xs Max, na mgbakwunye na XR (nke a na-akpọ iPhone dị ọnụ ala site na ọtụtụ ndị ọrụ). Maka mmalite ya na Spain, ekwentị ndị a na-abata na Orange.
Maka ndị ọrụ nwere mmasị, Orange na-ewetara ụdị ndị a n'efu na ụgwọ metụtara. Ya mere, ọ ga-adịrị gị mfe ịchọta nchikota kachasị mma maka ihe ị na-achọ. Dabere na usoro ị na-achọ, ọnụahịa ahụ ga-akwụ gị ụgwọ karịa.
Ọnụahịa efu (VAT gụnyere) Ọnụahịa ntinye ego na ọnụego (VAT gụnyere)
ọnụ libre Ego izizi Gwọ / ọnwa
iPhone XS 64GB 1.159 € 42,50 €
iPhone XS 256GB 1.329 € 48,95 €
iPhone XS 512GB 1.559 € 57,50 €
iPhone XS MAX 64GB 1.259 € 46,50 €
iPhone XS MAX 256GB 1.429 € 52,95 €
iPhone XS MAX 512GB 1.659 € 61,75 €
APPLE lelee S4 40MM 529 € 18,50 €
APPLE lelee S4 44MM 559 € 19,75 €
APple LEHERE NIKE S4 44MM 559 € 19,75 €
Ọnụahịa ndị dị na tebụl bụ nke Ezinụlọ Ezinụlọ Lovehụnanya, Lovehụnanya Ezinaụlọ Unlimited ma ọ bụ Unhụnanya Unlimited udu. Agbanyeghị na enwere ike ịnweta iPhones ọhụrụ a site na iji ọnụego oroma ndị ọzọ. Paymentkwụ ụgwọ izizi dị iche dabere na ọnụọgụ, mana ị nwere ike ikpokọta ha na ọnụego ndị ọrụ niile.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, iPhones ọhụrụ anaghị apụta na ọ dị ọnụ ala karịa. Ndị dị ọnụ ala karịa ha niile nwere ọnụahịa efu nke euro 1.159, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụ oke. Kedu ihe ị chere gbasara ọnụahịa nke ekwentị Apple ọhụrụ? Ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ọkọlọtọ gam akporo abụọ dị ka Galaxy Note 9 ma ọ bụ P20 Pro, ọnụahịa dị elu karịa.
Samsung Galaxy Note 9 bụ ụdị kachasị mma nke ụlọ ọrụ Korea ka ọ dị ugbu a, a rere ya na 1088 euro na Spain. Mgbe Huawei P20 Pro dị ugbu a maka euro 735 na ụdị 128 GB ya. Ha bụ oke ọnụ ala maka ụdị ndị na-agagharị n'otu akụkụ. Kedu ihe ị chere banyere ọnụahịa ndị a nke iPhone?
Site taa ọ ga - ekwe omume idobe ụdị ndị a na Orange, rue mgbe ọ malitere na September 21.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị ọrụ ekwentị » Ndị a bụ ọnụ ahịa nke iPhone ọhụrụ na oroma
Nokia 3.1 malitere ịnata Android 8.1 Oreo
Etu ị ga-esi nweta ngọngọ ngosi gam akporo P